प्रधानसेनापतिले लगाए कोरोना खोप - समाचार - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले कोभिड- १९ (कोरोना भाइरस)विरुद्धको खोप लगाएका छन् ।
प्रधानसेनापति थापाले सोमबार काठमाडौं छाउनीस्थित वीरेन्द्र अस्पतालमा कोरोना खोप लगाएको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालय जंगी अड्डाले जानकारी दिएको छ ।
नेपालमा माघ १४ गतेदेखि कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाउन सुरु भएको हो । सुरुमा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायत फ्रन्टलाइनमा रहेकाहरूलाई कोरोना खोप लगाइएको थियो भने दोस्रो फागुन २३ गतेदेखि ५५ वर्षभन्दा माथि उमेरकालाई लगाउने सरकारले तयारी गरेको छ ।
प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७७ १६:३५
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा संसदीय दलको नेता विधिवत् रूपमा फेर्न पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाललाई चुनौती दिएका छन् । साथै उनले आफू संसदीय दलमा पराजित भए प्रतिपक्षमा बस्ने पनि संकेत गरेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशमा आफूपक्षको नेकपाको प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ताको भेला र प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले संसदीय दलको बैठक बोलाइदिने र त्यसबाट आफूलाई हटाउन भनेका हुन् ।
आफूले बोलाएको बैठकमा आएर संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्न ओलीको भनाइ थियो । 'अध्यक्षले बोलाएको बैठकमा आउनुपर्‍यो, महासचिवले बोलाएको बैठकमा आउनुपर्‍यो, दलको नेताले बोलाएको बैठकमा आएनुपर्‍यो । उहाँहरू दलको नेता फेर्नुस् न ! विधिवत फेर्नुस्, बैठक बोलाइदिन्छु । आउनुस् न विधिवत,' उनले भने ।
विधिवत् रूपमा संसदीय दलको नेता फेर्दा आफूले मान्ने भनेका ओलीले संसदको बाँकी कार्यकाल प्रतिपक्षमा बस्ने पनि बताए ।
'विधि, पद्धति, संसदीय अभ्यास, संविधान, कानुन, नियमावली छ । उहाँहरू अपराधै गर्न सफल हुनुभयो भने पनि हामी मान्छौं । मानेर केही बिग्रिँदैन, डेढ वर्ष प्रतिपक्षमा बसौंला, डेढ वर्षपछि दुई तिहाई लिएर जाउँला,' ओलीले भने ।
दाहाल र नेपाल समूहले विधि र पद्धतिमा आएर बहुमत देखाउनुपर्ने ओलीको भनाइ थियो । 'बैठक बोलाएका ठाउँमा नआएर हामीसँग बहुमत छ भन्नुभएछ । त्यो बहुमत कहाँ पुष्टि भयो ? त्यो बहुमत होइन,' उनले भने ।
आफूले कुनै छलछाम नगर्ने तर विधि र पद्दतिमा आएर हटाउनुपर्ने ओलीको भनाइ थियो । आफ्नो तर्फबाट कुनै छलछाम नहुने पनि उनको भनाइ थियो ।
प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७७ १६:१७